မိုင်ယာမီခံစားကြည့်ပါ - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
မိုင်ယာမီ balmy လေညင်းနဲ့ခရီးသွားပူပွဲချင်းပြီးဖြစ်ပါသည်, နှင့်အံ့သြဖွယ်နေဝင်ဆည်းဆာတွေအများကြီးနဲ့နာမည်ကျော်မြို့ဖြစ်၏ သို့ ပေးကမ်း. Art Deco ကွန်ဒို မှစ. အလွကမ်းခြေရန်, မိုင်ယာမီဟာခရီးသွားမယ့်ပရဒိသုဖြစ်ပါသည်.
ဤသည်ဒါခေါ် မှော်မြို့က၎င်း၏အံ့သြဖွယ်အနုပညာအဘို့အသွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာမည်ကျော်သို့လာခဲ့သည်, ယဉျကြေးမှု, တွေကတော့, နှင့်စားသောက်ဖွယ်ရာ. အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သွားရောက်ဤမျှလောက်များစွာသောလှပသောသောနေရာများနှင့်ဒါနည်းနည်းအချိန်, ဒီလမ်းညွှန်ဒီမှော်မြို့မှသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးခွငျးအားဖွငျ့အစဉျအမွဲသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်များကို ပြင်ဆင်. ကူညီပေးပါမည်, သငျသညျဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်တစ်ခုခု.
မိုင်ယာမီဟာသူ့ရဲ့ပူနွေးများနှင့်အပူပိုင်းရာသီဥတုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ယင်း၏နွေးသော်လည်းမ swampy ကတည်းကမတ်လနှင့်မေလအကြားမိုင်ယာမီသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးကန့်. သငျသညျခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် ဘတ်ဂျက်အပေါ်, ခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးလအတွင်းဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလမှတဆင့်ရှိပါတယ်. သူတို့အားလအတွင်းဟိုတယ်နှုန်းထားများဆင်းလာလေ့, ပင်အချို့သောစားသောက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့လျှော့ချ အခွန်. ရာသီဥတုသူတို့အားလအတွင်းကပိုစိုစွတ်သောနေစဉ်, မိုင်ယာမီနေသမျှကာလပတ်လုံးနေရောင်ထွန်းလင်းနေသည်အဖြစ်အမြဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်.
ကဖလော်ရီဒါမှာအကောင်းဆုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားရှိပါတယ်အဖြစ်မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့န်းကျင်ရယူခြင်းတော်တော်လေးလွယ်ကူသည်. သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လွယ်ကူသောကဒ် Multi-လက်မှတ်ရမိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားများစွာကိုသောနေရာများသို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုချင်ဘူးဆိုရငျ, သင်တစ်ဦးတက္ကစီယူနိုင်ပါသည်. တက္ကစီတစ်ဝန်ပိုတို $2.50 တိုင်းရွေး-Up နှင့်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းများအဘို့ထဲကနေအထိ $30 သို့ $60.
သင်တစ်ဦးကားငှားလိုပါက, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုမိုင်ယာမီဗဟိုစခန်းဖြစ်ပါသည်, လေဆိပ်အနီး. ကားငှားဖို့သင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းယာဉ်ရပ်နားရှုပ်ထွေးနိုင်လျှင်ကိုးကားဖို့အရေးပါသောအရာ. တချို့ကဟိုတယ်များပင်သင့်ကားရပ်နေရာပူဇော်ကြဘူးနှင့်သင်သည်သင်၏ကားကိုရပ်ဖို့နေရာတွေ့ပါလုပျတဲ့အခါမှာ, သင်ကားရပ်နားမီတာအပေါ်တစ်ဦးစောင့်ရန်ရှိသည်.
မှာဆက်နေရန်နေရာများပဒေသာမိုင်ယာမီရန်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းရှိပါတယ်. သငျသညျကမ်းခြေအမြင်များကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မိုင်ယာမီနှင့်တောင်သဲသောင်ပြင်ထဲမှာဟိုတယ်များသင့်ရဲ့နံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုများမှာ. သင် Downtown အတွက်ဟိုတယ်များကိုရှေးခယျြသငျ့ပါကွောငျးမြို့တွင်းလူနေမှုလိုပါက, အဆိုပါဒီဇိုင်းခရိုင်, နှင့် Little ကကျူးဘား. သင်တို့သည်လည်းအုန်း Grove နှင့်သန္တာ Gables သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်
မိုင်ယာမီအံ့သြဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့သွားရောက်သောနေရာများနှင့်ပြည့်ဝ၏. သငျသညျကမ်းခြေမှာတစ်ရက်ဖြုန်းပျော်မွေ့ခြင်းရှိမရှိ, အပြည့်အဝနေ့ကစျေးဝယ်ဖြုန်း, ဒါမှမဟုတ်ပန်းခြံမှာသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှုရှာဖွေစူးစမ်း, မိုင်ယာမီအပန်းဖြေရှိပါတယ် လူတိုင်းရဲ့အရသာအဘို့အခွင့်အလမ်း. အောက်တွင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်
တောင်ပိုင်းကမ်းခြေ – သငျသညျတောင်ပိုင်းကမ်းခြေသို့သွားရောက်သည်အထိမိုင်ယာမီရန်သင့်ခရီးစဉ်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်. ကမ်းခြေမှာတစ်ရက်ဖြုန်းကနေ, စျေးဝယ်ရန်, Deco အနုပညာရှာဖွေစူးစမ်း, ဒီမှာနိုက်, ဧည့်သည်သူတို့အဘို့ရှာကြသည်အရာအားလုံးကိုတှေ့လိမျ့မညျ.
Everglades အမျိုးသားဥယျာဉ်– မိကျောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးရေတိမ်ပိုင်းမြစ်ဖြစ်ပါသည်, မြွေ, မိကျောင်း, ငှက်အပေါင်းတို့နှင့်မျိုး. ဒါဟာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကြည့်ရှုရန်မြစ်ရေထဲသို့ဧည့်သည်များကြာတဲ့ airboat ခရီးစဉ်ကမ်းလှမ်း.
တိရစ္ဆာန်ရုံမိုင်ယာမီ – ဒီတိရစ္ဆာန်ရုံမှာ, သငျသညျကမ္ဘာတဝှမ်းကနေအများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားသတ္တဝါများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်. သစ်ပင်သားပိုက်ကောင်ကနေ, meerkats, koalas, နှင့်ကျားသစ်, တိရစ္ဆာန်ရုံမိုင်ယာမီအိမ်များထက်ပို 2,000 ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ တစ်ဦး cageless ပတ်ဝန်းကျင်တွင်.
သိပ္ပံမိုင်ယာမီပြတိုက် – ကွဲပြားခြားနားသောသိပ္ပံနည်းကျလယ်ကွင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ, ဒီပြတိုက်လက်ပေါ်နှင့်အပြန်အလှန်ပြပွဲ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကကမ်းလှမ်း.
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကသင်၏ အရသာနှင့်စတိုင်, သငျသညျမိုင်ယာမီ၌သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်အိပ်မက်မက်အရာအားလုံးရှာတှေ့နိုငျ. သင်တစ်ဦးစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်သင်က Lincon လမ်းမကြီး Mall ကဖြစ်ကြသည်ကိုသွားသင့်တယ်, ဝါရှင်တန်ရိပ်သာလမ်း, နှင့် Downtown မိုင်ယာမီ.
ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောမိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်၎င်းတို့၏ကမ္ဘာသစ် Fusion ကိုအစားအစာနှင့်အတူ, စားမယ့်နှစ်သက်တော်မူ၏. ၎င်း၏အစားအစာဖလော်ရီဒါကနေဟင်းလျာများဆောင်တတ်၏, ကာရစ်ဘီယံ, နှင့်လက်တင်အမေရိက. နာမည်ကျော် Taco နှင့် Tex-Mex ထံမှ တစ်ဦးလက်တင်အမေရိကဝက်သားဟင်းနှင့် popusa chicharrónစားနပ်ရိက္ခာ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါများအတွက်ဒိန်ခဲနှင့်ကွဲပြားခြားနားဖြည့်နှင့်အတူကျပ်တစ်ပြောင်းဖူး tortilla.
feihu အထည်အလိပ်စက်အားဖြင့် Ltd ပူးတွဲ
လွန်ခဲ့သော : ဆိုးလ် Love
နောက်တစ်ခု : ဟောင်ကောင် Feeling